Ezemidlalo - Mag Incredible
Imibono Yesipho Yobungqabavu Bokuqina
Uma kukhulunywa ngokuthengela umuntu oshisekela imfanelo yokuzivocavoca umzimba, abantu abaningi bakholelwa ukuthi uma bengalandeli izinga elifanayo lokuqina lokuqina, abakwazi ukuthenga isipho esihle. Uma lokhu kuzwakala njengawe, futhi ufuna ukuqiniseka ukuthi unikeza…
I-Open Engalindelwanga Isehlakalo Esivelele Kulelihlobo
Ngenkathi uDustin Johnson ebanga ukunqoba kokuqala okukhulu komsebenzi wakhe ngokwenza kahle kakhulu, wonke amehlo aphendukela kwiBritish Open okuzoba isivivinyo esilandelayo sabo bonke abadlali begalufu abakhethekile emhlabeni jikelele. I-Open iqala ngomhlaka 10 kuJulayi ngo-…
Izwi Kubadlali Abangenazinyawo
Usuvele uthole okuningi mayelana nokugijima okungenazicathulo nokwenza izivivinyo ezingenalutho, kodwa, ungakwazi yini ukuhamba ungafake zicathulo endle? Ngemva kokuqeda lesi sihloko, uzokhanyiselwa ngezinye zezinzuzo, kanye nezihibe ezingaba khona zamathrendi angenazicathulo.…
Ukuqinisa umkhuba wakho wokuzivocavoca
Uma ukuvivinya umzimba kwakho kungasakhiqizi umphumela owufunayo, ungahle unamathele enkingeni. Izindlela ezindala kungenzeka zingabe zisakusiza ukuthi wandise amandla akho, zikugcina kuphela ezingeni elithile. Vele, awufuni ukuma. Kumele…
Izeluleko Ezisheshayo Zokugcina Ibhola Lakho Legalofu E-Fairway
Idizayini enhle, indawo ezungezile ebabazekayo kanye nemigwaqo emikhulu ephahlwe esihlahleni iveza umuzwa omkhulu wegalofu kumaklabhu wegalofu e-Texas. Izinkundla zegalofu zombuso zinikeza izinselelo ezinkulu kubadlali begalofu abashisekayo, ikakhulukazi uma bedlala ku-fairway. Amaphuzu aphansi owafisayo...
Imithetho Ye-Teeing Ground Ongathanda Ukuyazi
Awukwazi ukukhuluma ngenkathi udlala igalofu. Awuvunyelwe ukumisa iklabhu eguquguqukayo ngesikhathi somjikelezo. Awukwazi ukusebenzisa ikhampasi noma wenze ukuvikelwa unhlangothi elangeni noma emvuleni. Isikhathi sakho sokuqala ku-It noma yiziphi izifundo zegalufu eziseduze…
Kungani Kufanele Ubheke Ezindalini Zamahhashi Ase-Inthanethi
Izindali zamahhashi sezinesikhathi eside zikhona, kepha kulezi zinsuku ezimbalwa zazo seziku-inthanethi. Uma ufuna ukuthenga ihhashi elisha lomjaho, kunconywa kakhulu ukuthi uchithe isikhathi esithile ungene ku-inthanethi ukubona ukuthi…
Kungani Abasubathi Kufanele Bazijwayeze Ngama-Treadmills?
Kwangathi 30, 2022
Izikebhe zokunyathelisa zibhekwa njengezingxenye ezibalulekile kunoma iyiphi iklabhu lezempilo nasejimini. Besibona abantu abaningi besebenzisa imishini yokunyathela nsuku zonke futhi leli thuluzi lokuqina lisizuzisa nabasubathi abangochwepheshe. Kukhona ukuxhumana okuseduze phakathi kwemishini yokunyathela kanye nemidlalo; futhi kungaphezu…
Ukubaluleka Kwezimali Zedijithali Ukudlala Imidlalo Njalo
Kwangathi 28, 2022
Njengoba ungumdlali oqinile wemidlalo yeqembu ye-inthanethi ekhethekile, ingabe ukhiyelwe ukuze ubambe iqhaza kumageyimu ngaphezu kwamakhonsoli? Kukhona ama-consoles amaningi akhona emakethe kulezi zinsuku, ngayinye yawo ihlanganiswe nezici ezintsha. Izikweletu ezithokozisayo nezikhuthazayo…
Ukulimala Okuvamile Kwe-Basketball
Kwangathi 5, 2022
Ezingxenyeni eziningi zomhlaba, i-basketball ingomunye wemidlalo ethandwa kakhulu. Ngenxa yalesi sizathu, abantu emhlabeni wonke bagijimela kulo mdlalo kaningi futhi ngamanani amakhulu, okuholela ekulimaleni nakanjani. Impela, akekho oya enkantolo elindele...
1 2 3 ... 23 Olandelayo